Coconut Flanks-Brazilian - Quindim Recipe
Cunto miro Macmacaanka Cuntada South American Food Macmacaanka South America
Coconut Flammaanka Brazil - Quindim
Noocyo kala duwan oo yaryar ah, oo loo yaqaan 'petit four-like treats' ayaa badanaa loo adeegaa dhinacyada koonfurta maraykanka. Quindim, daweeye coconut caan ah oo laga sameeyey Brazil waxaa lagu sameeyay jaakado badan, ukunta, sonkorta, iyo subagga, waxaa badanaa loo adeegaa sidan, inkastoo sidoo kale lagu samayn karo hal haad oo weyn. Quindim waxaa lagu dubay barkadda biyaha, qumbaha qiiqa ayaa kor u kacaya marka ay dubayso. Keega ayaa markaa laga saaraa qalajoofyada si ay u muujiyaan cadadka dahabiga ah ee xabadka. Coconut wuxuu noqonayaa qolof jilicsan.
8 qaado oo sabdo ah (oo lagu daray 2 qaado oo sabdo ah oo dhalaalaya subagga)
1 1/3 koob oo sonkor ah (oo lagu daro wax kale oo loogu talagalay boodhka digsiyada)
14 xabbo ukun (oo lagu daro 1 ukun dhan)
1 qaado oo ah macmacaan qumbaha
1/2 qaado shaashadda
1 2/3 koobabka qumbaha (cusub ama la qaboojiyey, oo si caan ah u daadi, aan la qallajin)
Iyadoo burushka kareemka ah , rinjiga subagga ayaa ka dhalaalay subagyada oo dhan 2 shimbir yar-yar-yar-yar.
Sonkorta ku rusheeyso si ka baxsan dhamaan kaluunyada, ka dibna u leexo weelka korontada oo jarjar qaybta.
Foorno ku dheji ilaa 350 darajo, iyo kuleylka biyaha kuleylka.
Caji subagga leh sonkorta iyo cusbada illaa inta qalafsan.
Xaqiiji in ugxumada iyo ukumaha ukunta ay heerkulka qolka (waxaad kululeyn kartaa microwave haddii loo baahdo). Ku dar ukumaha midkiiba hal mar, si fiican u dara kaddib. Gawaarida waa inay noqdaan kuwo siman. Iska ilaali dhadhanka qumbaha iyo vaniljiga.
Ku laabo qumbaha cusub. (Haddii qumbaha aan si fiican loo daadin, ka shaqee mashiinka cuntada ama blender marka hore).
Ku rid digad kasta oo koobbi ku dhex jira digsi weyn oo leh dhinacyada, sida digsi duban. Buuxi caaryo kasta oo koobbi ah oo ku dhow mashiinka dhaadheer.
Biyaha kulul ku shub digsi weyn si qoto dheer oo qiyaastii ah 3/4 oo dherer ah, sidaa daraadeed qumbadu waxay ku fadhidaa biyo kulul , adigoo ka taxadaraya inaadan biyaha u daadin. Mararka qaarkood waxay caawisaa in la geliyo foornada foornada marka hore, ka dibna biyaha ku shub digsi hoose, sidaa daraadeed biyuhu ma wareegsan yihiin inta aad u guurtay foornada foornada.
Xannaanaynta xayawaanka ilaa 15 daqiiqo, ama ilaa ay ku adkeeyaan taabashada iyo khafiifka dahabka ah.
Isku qabow 15 daqiiqo roogga. Si aad uga saarto xannaanooyinka, mindi ku hareer si aad uga daboosho digsiga ka dibna si tartiib ah u dabool iyaga ama kor u qaad. Haddii aanay si fudud u soo bixi doonin, marka hore u daa.
Ku darso qabow.
Fiiro gaar ah: Cuntadani waxaa lagu sameyn karaa hal qoyn ah oo qadar ah, si ay u sameeyaan 12 xajmiga cabbirka qiyaasta. Waxa kale oo aan ka dhigi karaa cabbir dhexdhexaad ah (6 ilaa 7 koob) caaryar ah.
Fatuurad la ruxay 10 g
Kolestarool 263 mg
Carbohydrateska 25 g
Sida loo sameeyo Fondant Marshmallow
Salad Geedka Cagaaran ee Beesha
Cunto fudud oo dhadhan fiican leh
Tomato Khudradeed iyo Bean Casserole oo leh Breadcrumb Topping
Tilmaamaha 10 Tilmaamaha Gaarka ah
Ground Seef Tacos
Jarmal Karamellisierten Zwiebeln Recipe
Sidee loo daweynayaa wareejinta 10 tallaabo oo fudud
Sidee Caffeine ku jirtaa Kafee & Espresso?
Fudud Dhammaan Dhukun Cunto Khudradda Lasagna
Waa Maxay Lacagta?
Spiced Spice Honey
Macmacaanka Bariga Dhexe
Polygon Kudhaa Kaluunka Mushrooms (Sos Grzyby Suszone) Recipe
Mini Geef Wellingtons